China Soft PVC Medals fekitari uye vagadziri | SJJ
Menduru anogara achishandiswa mumitambo, zvikoro, mapato uye zviitiko zvemubairo, zviyeuchidzo, kukwidziridzwa uye zvipo. Tichifunga nezve hutano, zvakatipoteredza uye zvimwe zvakanakira, mazhinji uye akawanda masangano anosarudza mhete dzePV mhete pane echinyakare esimbi menduru.
Menduru anogara achishandiswa mumitambo, zvikoro, mapato uye zviitiko zvemubairo, zviyeuchidzo, kukwidziridzwa uye zvipo. Tichifunga nezve hutano, zvakatipoteredza uye zvimwe zvakanakira, mazhinji uye akawanda masangano anosarudza mhete dzePV mhete pane echinyakare esimbi menduru. Iwo akapfava PVC menduru anogadzirwa nefa yakarova yakapfava PVC zvinhu izvo zvakapfava uye zvakapusa, zvakanaka kune zvakatipoteredza, zvakanaka kurondedzera zvakadzama marogo neakajeka uye akakosha mavara mazinga.
Yedu nyoro PVC menduru anogara achigadzirwa zvinoenderana nevatengi dhizaini. Iwo marogo anogona kuitwa mu2D kana 3D pane imwechete kana mativi ese maviri, nemuvara wakazadzwa, wakadhindwa, laser unyore hwokugadzira maitiro uye nezvimwe. Nyanzvi yedu yehunyanzvi ichapa mamwe mazano ekuzadzikisa mazano ako uye nemweya yakadzika pane yakapfava menduru dzePVC. Nezvakasiyana zvakasungirirwa, mhete dzakapfava dzePV dzinogona kusungirirwa pamaribhoni kana ribhoni mabara. Marogo haasi kungoiswa pamamenduru chete, asiwo maribhoni kana ribhoni mabara, kuratidza zvimwe zvinhu uye kushambadza ako marangi uye zvidzidzo zviri nani.
Motifs: Kufa Yakarohwa, 2D kana 3D, isina kana maviri mativi, magadzirirwo anogona kuve akagadzirwa.
Maumbirwo: Akatenderera, akaenzana, akaenzana, kana chero maumbirwo zvinoenderana neyako dhizaini
Saizi: isingasviki 150 mm kana kutsamira pane ako magadzirirwo
Kupedzisa: Logos inogona kuve izere nemavara, yakadhindwa, yakadhirowewa kana kuraswa, Laser
akanyorwa uye zvichingodaro
Apex 1pc / polybag, kana kutevedzera kuraira kwako.
Pashure: Yakapfava PVC Penzura Toppers
munyoro pvc menduru
Mitambo yeMedals & Medallions